Generator ets, Mapụtara Parts maka Generator ets - Gị Dị ka
5kw diesel generator nwere Invention Patent, Design Patent na Noise dị n'okpuru 70db (7m), nnukwu agwa anaghị enwe ike ọ bụla ọbụlagodi mgbe ọ rụchara ọrụ ogologo oge, ma jiri 100% ọla kọpa alternator na akụkụ anyị mapụtara bụ ihe siri ike. Banyere mmezi dị mfe, anyị nwere ike ịgbanwe ahịhịa carbon n'èzí ozugbo. Otu ibu buru ibu 144. ihe bụ ihe ọzọ, o nwere 360 ​​Celsius wiil, nwere ike ịkpali free. Top ndokwasa zinc-efere ma n'ime ma n'èzí mmanụ ụgbọala tank jide n'aka na ọ dịghị mmanụ dizel.
Iledị ihe na-enweghị atụ dizel na-eji ihe eji achọ mma nke nwere arc nke nwere agba dị ala bụ ọrụ na-arụ ọrụ na mkpọtụ mkpọtụ. Aslo onye ozo bu 100% ọla kọpa. Anyị ịmụta n'elu zinc-efere mmanụ ụgbọala tank na 8 awa nọgidere na-agba ọsọ. Uma nke akwụkwọ nzacha ikuku bụ nke Korea ebubata. Ihe bụ ihe ọzọ anyị na-eji larịị 8 shockproof ịghasa. Na ebe edobere ụzọ forklit (ụdị emere) iji kwado gị ngwa ngwa mgbe ọrụ ahịa gasịrị.
Trailer ụdị generator setịpụrụ nwere nnukwu ụda mkpọtụ arụmọrụ na njedebe mkpọtụ bụ 75dB (A) (1m site na nkeji ahụ). Multi-oyi akwa ọta impedance mismatch ụda mkpuchi mkpuchi. Na oru oma mkpọtụ Mbelata ụdị multi-ọwa oriri na iyuzucha, oriri na iyuzucha ikuku ọwa, iji hụ zuru ike arụmọrụ nke unit. Anyị na-eji nnukwu impedance mejupụtara silencer na nnukwu ikike mmanụ ụgbọala burner. Ihe bụ ihe ọzọ, ndị pụrụ iche ngwa ngwa oghere efere dị mfe maka mmezi.
Igwe ọkụ ọkụ nke etinyere ya na kọmpat na obere okike.it dị mfe nke otu onye na-arụ ọrụ ga-edozi. Ezigbo maka obere ọrụ na obere. Multiplemụta multiple shockproof Ọdịdị imewe, magburu onwe mgbochi ujo arụmọrụ na ike iji reliably na elu ugboro ujo environment.Adopt gburugburu ebe obibi ìhè alloy ihe na elu-tech spraying technology, waterproof, dustproof, antirust na kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ na n'èzí na gburugburu ebe obibi ruo ogologo oge. Mmekọrịta electromagnetic zuru oke ma enweghị ike ibute nnyonye anya na ntanetị nnyefe; Igwe ọkụ niile na-ewebata ihe dị mma dị elu nke dị elu, nke dị elu ma nwee ntụkwasị obi ma na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu obi ọjọọ.
nabata ụlọ ọrụ anyị
Gị dị ka ike (FUZHOU) CO., LTD., Bụ otu n'ime ole na ole OEM emepụta na China kpọkọta mmepe imewe, n'ichepụta na ahịa na otu, na ruo ihe karịrị 30 Ikike nchọpụta Kemịkalụ, ọkachamara na mmepụta nke generator tent na ya ngwa , Ma nwee ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe mmepụta na-akwado akụkụ. Companylọ ọrụ ahụ enwela ngwa ọrụ mmepụta yana usoro nyocha zuru ezu, nwere otu ndị ọkachamara na ndị ọrụ teknụzụ dị elu, ma nwee ikike nke ọhụụ. Main ngwaahịa ndị 1-5 kw ikuku-mma generator na 10-2000 kw mmiri-mma generator.